သင့်ကလေးရဲ့ အသိဥာဏ်ကို မြှင့်တင်ပေးလိမ့်မယ့် အစားအစာ (၁၀)မျိုး - Lifestyle Myanmar
Home Family သင့်ကလေးရဲ့ အသိဥာဏ်ကို မြှင့်တင်ပေးလိမ့်မယ့် အစားအစာ (၁၀)မျိုး
သင့်ကလေးရဲ့ အသိဥာဏ်ကို မြှင့်တင်ပေးလိမ့်မယ့် အစားအစာ (၁၀)မျိုး
မေမေတို့ရေ..ကလေးရဲ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်နေပါသလား? ဥာဏ်ကောင်းတဲ့ကလေးလေးအဖြစ် ပြုစုပျိုးထောင်လိုပါသလား? ဒီအချက်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စိုးရိမ်နေစရာ မလိုပါဘူး။ ကလေးရဲ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးဘဝရဲ့ ပထမဆုံး သုံးနှစ်တာဟာ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုအတွက် အရေးပါပါတယ်။ ဒီအရွယ်မှာ ဘေဘီလေးတွေကို ဥာဏ်ကောင်းစေတဲ့ အစားအစာများ ကျွေးရမှာ ဖြစ်သလို သီချင်းပေးနားထောင်ခြင်း၊ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို စူးစမ်းလေ့လာခွင့်ပေးခြင်း၊ ဂိမ်းတွေ ပေးကစားခြင်းကဲ့သို့ လှုပ်ရှားမှုများတို့လည်း ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးရဲ့ဦးနှောက်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်လာတဲ့အခါ အစားအစာကလည်း အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘေဘီလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မယ့် အစားအစာနှင့် ပတ်သတ်ပြီး မေမေတို့သိရှိစေဖို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ မေမေတို့ရဲ့ ဘေဘီလေးတွေ ၃နှစ်ပြည့်ပြီဆိုရင် ဒီအစားအစာလေးတွေ ကျွေးလို့ရတယ်နော်။
ဂရိဒိန်ချဉ်က ကလေးဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် စူပါအစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ ဂရိဒိန်ချဉ်က ဦးနှောက်ကို သတင်းအချက်အလက်တွေ ပို့ဆောင်၊ လက်ခံခြင်းမှာ ကူညီပေးတဲ့ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သော ဦးနှောက်ဆဲလ်အမြှေးပါးတွေကို ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။ ဂရိဒိန်ချဉ်မှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင် B complex က ဦးနှောက်အတွင်းမှာရှိတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ neurotransmitters နှင့် ဦးနှောက်တစ်ရှူးများရဲ့ ကြီးထွားမှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။
အရောင်ရင့်ရင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဟာ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ အင်တီအောက်ဆီဒင့် အရင်းအမြစ်များဖြစ်ပါတယ်။ အင်တီအောက်ဆီဒင့်က ဦးနှောက်ဆဲလ်များကို ကျန်းမာစွာ ထိန်းသိမ်းဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ ဦးနှောက်အတွက် အကောင်းဆုံးဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်ချို့ကတော့ ကန်စွန်းဥ၊ ဖရုံသီး၊ မုန်လာဥနီတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကိုက်လန်၊ မုန်ညင်း၊ ဟင်းနုနွယ်ရွက်ကဲ့သို့ အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့် ဂေါ်ဖီထုပ်များက မှတ်ဥာဏ်ချို့တဲ့ခြင်းကို ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ ဖောလစ်ဓါတ်ကြွယ်ဝပါတယ်။
ဘရိုကိုလီ ပန်းဂေါ်ဖီစ်ိမ်းက ကလေးရဲ့ဦးနှောက်အတွက် နောက်ထပ်စူပါအစားအစာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းမှာ အာရုံခံကို ချိတ်ဆက်ကူညီပေးတဲ့ DHA ပါဝင်ပါတယ်။ ၎င်းမှာ ကင်ဆာတိုက်ဖျက်ပေးတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိများလည်း ရှိပါတယ်။
ထောပတ်သီးက ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးရှိပါတယ်။ ဦးနှောက်သွေးစီးဆင်းမှုကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့ မပြည့်ဝဆီ အရင်းအမြစ် ကြွယ်ဝပါတယ်။၎င်းမှာ myelinကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ oleic acid လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ myelin က တစ်နာရီကို မိုင်၂၀၀အမြန်နှုန်းနဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို သွားလာဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ ထောပတ်သီးထဲမှာပါတဲ့ ဗီတာမင် B-complex ရဲ့မြင့်မားမှုက ကလေးတွေမှာ သွေးတိုးခြင်းအန္တရာယ်ကို လျော့ချပေးပါတယ်။
ဆော်လမွန်ငါး၊ တူနာငါးနှင့် mackerel ကဲ့သို့သော ဖက်တီးငါးတွေမှာ ဦးနှောက်တစ်ရှူးတွေကို တည်ဆောက်မှုမှာ ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ အိုမီဂါ ဖက်တီး အက်ဆစ်များ ပါဝင်ပါတယ်။ အိုမီဂါ3ဖက်တီးအက်ဆစ်များက ဘေဘီလေးတွေမှာ ဦးနှောက်ရဲ့တာဝန်များနှင့် ကြီးထွားမှုကို ကူညီပေးပါတယ်။ ငါးကို ပုံမှန်စားသုံးခြင်းက ကလေးရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုကို တိုးတတ်စေပါလိမ့်မယ်။
ကြက်ဥက အာဟာရရဲ့ စပါးကျီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းမှာ အာရုံစူးစိုက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့ choline ၊lutein ၊ Zinc ၊ အိုမီဂါ 3ဖက်တီးအက်ဆစ်ကဲ့သို့ အာဟာရများ ပါရှိပါတယ်။ Choline က မှတ်ဥာဏ်ပင်မဆဲလ် သို့မဟုတ် acetylcholine ထုတ်လုပ်မှုမှာ ကူညီပေးပါတယ်။ ဒါက ကလေးတွေမှာ မှတ်ဥာဏ်တိုးတတ်စေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
ကောက်ပဲသီးနှံများက ကလေးတွေရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကို တိုးတတ်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ၎င်းမှာ ဦးနှောက်ရဲ့ သင့်လျော်တဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ဖောလိတ် ပါဝင်ပါတယ်။
အုတ်ဂျုံနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အစားအစာကို နံနက်စာအဖြစ် စားသုံးတဲ့သူတွေမှာ မှတ်ဥာဏ်သိသိသာသာ ပိုကောင်းကြောင်း လေ့လာမှုတစ်ခုက ဖော်ပြထားပါတယ်။ အုတ်ဂျုံမှာ ဗီတာင်မင်အီး၊ သွပ်နှင့် ဗီတာမင် B-complex တို့ကြွယ်ဝပါတယ်။ ၎င်းမှာ အမျှင်ဓါတ်မြင့်မားစွာ ပါဝင်ပါတယ်။
Tufts University မှ သုတေသနအရ ဘယ်ရီသီးများက ကြွက်တွေရဲ့ သိမြင်မှု လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ ဘယ်ရီသီးများမှာ ပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်စီမြင့်မားမှုက ကလေးတွေမှာ မှတ်ဥာဏ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ဦးနှောက်ထဲမှာ oxidative စိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်း တားဆီးပေးပါတယ်။
သစ်ကြားသီး၊ almonds စေ့နှင့် မြေပဲကဲ့သို့ အခွံမာသီးများက ဦးနှောက်ကို ဖွံ့ဖြိုးစေတဲ့ အစားအစာများဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစားအစာများမှာ Vitamin E ရဲ့မြင့်မားတဲ့ အဆင့်များက မှတ်ဥာဏ်ယိုယွင်းခြင်းကို တားဆီးပေးပါတယ်။ အခွံမာသီးများက မှတ်ဥာဏ်နဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ပိုကောင်းစေတဲ့ ဇင့်ဓါတ်ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီစူပါအစားအစာများက ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ကောင်းသော မရှိမဖြစ်အာဟာရဓါတ်တွေ အများကြီးပါပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မေမေတို့ရဲ့ ကလေးလေး ဥာဏ်ကောင်းစေဖို့ ဒီအစားအစာတွေ ကျွေးဖို့ မမေ့သင့်ပါဘူး။
သငျ့ကလေးရဲ့ အသိဉာဏျကို မွှငျ့တငျပေးလိမျ့မယျ့ အစားအစာ (၁၀)မြိုး
မမေတေို့ရေ..ကလေးရဲ့ဦးနှောကျဖှံ့ဖွိုးမှုနှငျ့ ပတျသတျပွီး စိုးရိမျပူပနျနပေါသလား? ဉာဏျကောငျးတဲ့ကလေးလေးအဖွဈ ပွုစုပြိုးထောငျလိုပါသလား? ဒီအခကျြတှနေဲ့ ပတျသတျပွီး စိုးရိမျနစေရာ မလိုပါဘူး။ ကလေးရဲ့ဦးနှောကျဖှံ့ဖွိုးမှုနှငျ့ ပတျသတျပွီး နညျးလမျးကောငျးလေးတှေ မြှဝပေေးမှာဖွဈပါတယျ။
ကလေးဘဝရဲ့ ပထမဆုံး သုံးနှဈတာဟာ ဦးနှောကျဖှံ့ဖွိုးတိုးတတျမှုအတှကျ အရေးပါပါတယျ။ ဒီအရှယျမှာ ဘဘေီလေးတှကေို ဉာဏျကောငျးစတေဲ့ အစားအစာမြား ကြှေးရမှာ ဖွဈသလို သီခငျြးပေးနားထောငျခွငျး၊ သူ့ပတျဝနျးကငျြကို စူးစမျးလလေ့ာခှငျ့ပေးခွငျး၊ ဂိမျးတှေ ပေးကစားခွငျးကဲ့သို့ လှုပျရှားမှုမြားတို့လညျး ပွုလုပျပေးရမှာဖွဈပါတယျ။ ကလေးရဲ့ဦးနှောကျကို ပွုစုပြိုးထောငျခွငျးနှငျ့ ပတျသတျလာတဲ့အခါ အစားအစာကလညျး အရေးပါသော အခနျးကဏ်ဍမှ ပါဝငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဘဘေီလေးတှရေဲ့ ဦးနှောကျဖှံ့ဖွိုးမှုကို မွှငျ့တငျပေးနိုငျမယျ့ အစားအစာနှငျ့ ပတျသတျပွီး မမေတေို့သိရှိစဖေို့ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။ မမေတေို့ရဲ့ ဘဘေီလေးတှေ ၃နှဈပွညျ့ပွီဆိုရငျ ဒီအစားအစာလေးတှေ ကြှေးလို့ရတယျနျော။
ဂရိဒိနျခဉျြက ကလေးဦးနှောကျဖှံ့ဖွိုးမှုအတှကျ စူပါအစားအစာဖွဈပါတယျ။ ဂရိဒိနျခဉျြက ဦးနှောကျကို သတငျးအခကျြအလကျတှေ ပို့ဆောငျ၊ လကျခံခွငျးမှာ ကူညီပေးတဲ့ ပွောငျးလှယျပွငျလှယျသော ဦးနှောကျဆဲလျအမွှေးပါးတှကေို ထိနျးသိမျးပေးပါတယျ။ ဂရိဒိနျခဉျြမှာပါဝငျတဲ့ ဗီတာမငျ B complex က ဦးနှောကျအတှငျးမှာရှိတဲ့လှုပျရှားမှုတှကေို ထိနျးခြုပျပေးတဲ့ neurotransmitters နှငျ့ ဦးနှောကျတဈရှူးမြားရဲ့ ကွီးထှားမှုအတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျပါတယျ။
အရောငျရငျ့ရငျ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှဟော အလှနျအစှမျးထကျတဲ့ အငျတီအောကျဆီဒငျ့ အရငျးအမွဈျမြားဖွဈပါတယျ။ အငျတီအောကျဆီဒငျ့က ဦးနှောကျဆဲလျမြားကို ကနျြးမာစှာ ထိနျးသိမျးဖို့ ကူညီပေးပါတယျ။ ဦးနှောကျအတှကျ အကောငျးဆုံးဟငျးသီးဟငျးရှကျတဈခြို့ကတော့ ကနျစှနျးဥ၊ ဖရုံသီး၊ မုနျလာဥနီတို့ ဖွဈကွပါတယျ။ ကိုကျလနျ၊ မုနျညငျး၊ ဟငျးနုနှယျရှကျကဲ့သို့ အစိမျးရောငျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြားနှငျ့ ဂျေါဖီထုပျမြားက မှတျဉာဏျခြို့တဲ့ခွငျးကို ထိနျးသိမျးပေးတဲ့ ဖောလဈဓါတျကွှယျဝပါတယျ။
ဘရိုကိုလီ ပနျးဂျေါဖီဈိမျးက ကလေးရဲ့ဦးနှောကျအတှကျ နောကျထပျစူပါအစားအစာ ဖွဈပါတယျ။ ၎င်းငျးမှာ အာရုံခံကို ခြိတျဆကျကူညီပေးတဲ့ DHA ပါဝငျပါတယျ။ ၎င်းငျးမှာ ကငျဆာတိုကျဖကျြပေးတဲ့ ဂုဏျသတ်တိမြားလညျး ရှိပါတယျ။
ထောပတျသီးက ဦးနှောကျကနျြးမာရေးအတှကျ အကြိုးရှိပါတယျ။ ဦးနှောကျသှေးစီးဆငျးမှုကို မွှငျ့တငျပေးတဲ့ မပွညျ့ဝဆီ အရငျးအမွဈ ကွှယျဝပါတယျ။၎င်းငျးမှာ myelinကို ကာကှယျပေးတဲ့ oleic acid လညျး ပါဝငျပါတယျ။ myelin က တဈနာရီကို မိုငျ၂၀၀အမွနျနှုနျးနဲ့ သတငျးအခကျြအလကျတှကေို သှားလာဖို့ ကူညီပေးပါတယျ။ ထောပတျသီးထဲမှာပါတဲ့ ဗီတာမငျ B-complex ရဲ့မွငျ့မားမှုက ကလေးတှမှော သှေးတိုးခွငျးအန်တရာယျကို လြော့ခပြေးပါတယျ။
ဆျောလမှနျငါး၊ တူနာငါးနှငျ့ mackerel ကဲ့သို့သော ဖကျတီးငါးတှမှော ဦးနှောကျတဈရှူးတှကေို တညျဆောကျမှုမှာ ထောကျပံ့ပေးတဲ့ အိုမီဂါ ဖကျတီး အကျဆဈမြား ပါဝငျပါတယျ။ အိုမီဂါ3ဖကျတီးအကျဆဈမြားက ဘဘေီလေးတှမှော ဦးနှောကျရဲ့တာဝနျမြားနှငျ့ ကွီးထှားမှုကို ကူညီပေးပါတယျ။ ငါးကို ပုံမှနျစားသုံးခွငျးက ကလေးရဲ့စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ကြှမျးကငျြမှုကို တိုးတတျစပေါလိမျ့မယျ။
ကွကျဥက အာဟာရရဲ့ စပါးကြီတဈခုဖွဈပါတယျ။ ၎င်းငျးမှာ အာရုံစူးစိုကျမှုကို မွှငျ့တငျပေးတဲ့ choline ၊lutein ၊ Zinc ၊ အိုမီဂါ 3ဖကျတီးအကျဆဈကဲ့သို့ အာဟာရမြား ပါရှိပါတယျ။ Choline က မှတျဉာဏျပငျမဆဲလျ သို့မဟုတျ acetylcholine ထုတျလုပျမှုမှာ ကူညီပေးပါတယျ။ ဒါက ကလေးတှမှော မှတျဉာဏျတိုးတတျစဖေို့ ကူညီပေးပါတယျ။
ကောကျပဲသီးနှံမြားက ကလေးတှရေဲ့ အာရုံစူးစိုကျမှုကို တိုးတတျကောငျးမှနျစပေါတယျ။ ၎င်းငျးမှာ ဦးနှောကျရဲ့ သငျ့လြျောတဲ့ လုပျငနျးဆောငျတာမြားအတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ ဖောလိတျ ပါဝငျပါတယျ။
အုတျဂြုံနဲ့လုပျထားတဲ့ အစားအစာကို နံနကျစာအဖွဈ စားသုံးတဲ့သူတှမှော မှတျဉာဏျသိသိသာသာ ပိုကောငျးကွောငျး လလေ့ာမှုတဈခုက ဖျောပွထားပါတယျ။ အုတျဂြုံမှာ ဗီတာငျမငျအီး၊ သှပျနှငျ့ ဗီတာမငျ B-complex တို့ကွှယျဝပါတယျ။ ၎င်းငျးမှာ အမြှငျဓါတျမွငျ့မားစှာ ပါဝငျပါတယျ။
Tufts University မှ သုတသေနအရ ဘယျရီသီးမြားက ကွှကျတှရေဲ့ သိမွငျမှု လုပျငနျးဆောငျတာတှကေို မွှငျ့တငျပေးပါတယျ။ ဘယျရီသီးမြားမှာ ပါဝငျတဲ့ ဗီတာမငျစီမွငျ့မားမှုက ကလေးတှမှော မှတျဉာဏျကို ပိုမိုကောငျးမှနျစပေါတယျ။ ဦးနှောကျထဲမှာ oxidative စိတျဖိစီးမှုကိုလညျး တားဆီးပေးပါတယျ။
သဈကွားသီး၊ almonds စနှေ့ငျ့ မွပေဲကဲ့သို့ အခှံမာသီးမြားက ဦးနှောကျကို ဖှံ့ဖွိုးစတေဲ့ အစားအစာမြားဖွဈပါတယျ။ ဒီအစားအစာမြားမှာ Vitamin E ရဲ့မွငျ့မားတဲ့ အဆငျ့မြားက မှတျဉာဏျယိုယှငျးခွငျးကို တားဆီးပေးပါတယျ။ အခှံမာသီးမြားက မှတျဉာဏျနဲ့ ဦးနှောကျဖှံ့ဖွိုးမှုကို ပိုကောငျးစတေဲ့ ဇငျ့ဓါတျပါဝငျပါတယျ။
ဒီစူပါအစားအစာမြားက ဦးနှောကျဖှံ့ဖွိုးမှုအတှကျ ကောငျးသော မရှိမဖွဈအာဟာရဓါတျတှေ အမြားကွီးပါပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ မမေတေို့ရဲ့ ကလေးလေး ဉာဏျကောငျးစဖေို့ ဒီအစားအစာတှေ ကြှေးဖို့ မမသေ့ငျ့ပါဘူး။
Previous articleစစ်ရေးလေ့ကျင့်ရေးစခန်းမှာ ဒဏ်ရာရပြီး သေဆုံးသွားတဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံက သရုပ်ဆောင် Aloysius Pang
Next articleခေတ်လွန် idea အချို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာလား အပျင်းကြီးကြတာလား မသဲကွဲဘူးနော်